Kunye nenkulumbuso yolu ngcelele Unxweme lweeMosquito, iApple ipapasha okhethekileyo ngasemva | Ndisuka mac
Namhlanje, ngo-Epreli 30, njengoko u-Apple wabhengeza kwinyanga ephelileyo, inkonzo yevidiyo ka-Apple yokusasaza ikhuphe uthotho Unxweme lweengcongconi, enye Iziqendu ezisixhenxe zenkonzo Yaphefumlelwa yinoveli eyakhokelela kwifilimu apho uHarrison Ford, wayeneminyaka engama-35 kulo nyaka.
Kunye nenkulumbuso yesiqendu sokuqala, u-Apple uthumele ividiyo kwisiteshi sayo se-YouTube apho isibonisa khona Amaxesha okurekhoda, kunye nodliwanondlebe kunye nabalinganiswa abaphambili kuthotho kunye nombhali wencwadi apho ifilimu isekwe khona, uPaul Theroux.
Inkcazo yale vidiyo sinokufunda:
Ukusuka kumbhali wenoveli ophumelele amabhaso uNeil Cross, kwaye esekwe kumthengisi othengisa kakhulu kaPaul Theroux ebhiyozela isikhumbuzo seminyaka engama-40 kulo nyaka, "Unxweme lweengcongconi" yinto ebambekayo nenomdlalo weqonga olandela uhambo oluyingozi olusuka kumbono oqinisekileyo kunye nomsunguli oqaqambileyo, uAllie UFox (odlalwa nguJustin Theroux), osusa usapho lwakhe ukuba luye eMexico xa ngequbuliso bezifumana bebaleka kurhulumente wase-US.
Uthotho lweziqendu ezisixhenxe luveliswe nguNeil Cross kunye noRupert Wyatt, (olawula iziqendu ezibini zokuqala), umbhali UPaul Theroux, uJustin Theroux kunye no-Edward L. McDonnell, uAlan Gasmer, uPeter Jaysen, noBob Bookman. Ukulungiswa kukamabonakude kule noveli kuqhutywa ngumvelisi uFremantle.
Ukuba ububonile imovie ngelo xesha kwaye awucacanga ukuba olu tshintsho lutsha lunokuba lunomdla kuwe, ndiyakumema ukuba ujonge i-trailer epapashwe ngu-Apple kwinyanga ephelileyo kwaye ndikushiya apha ngezantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Kunye nenkulumbuso yothotho lweengcongconi, iApple ipapasha isigcawu esikhethekileyo